REENOEMANN: November 2009
Posted by Ree Noe Mann at 10:58:00 AM 18 comments:
ဒီစကားနှစ်ခွန်းလုံးကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ဒီစာလေးကို ချရေးမိတာပါ...
(အရာအားလုံးရဲ့ အခြေခံကျတယ်ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒနဲ့ကျောင်းပြီးထားသူတယောက်ဆိုပေမယ့် မှန်တယ်ဆိုတာ..မမှားပါဘူးလို့ သေချာနေတဲ့ အဖြေတခုကို မရေမရာဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒဿနိကဗေဒ ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်)..စာပေချစ်မြတ်နိုးသူပါ.
လူတိုင်းမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ အနုပညာကိုယ်စီရှိကြပါတယ်.ရင်ထဲက ခံစားချက်လေးတွေကို ချရေးတာနဲ့ တင်ပြတာမတူပါဘူး..ဟိုတုန်းကဆိုရင် အရမ်းခံစားရသည်ဖြစ်စေ.. ပျော်ရွှင်သည်ဖြစ်စေ.. နာကျည်းချက်များ.. အမှတ်တယများကို.. ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာ.. ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ကဗျာကလေးတွေအဖြစ်နဲ့တသွယ်.. ၀ထ္ထုလေးတပုဒ်အနေနဲ့တဖုံ.. အစုံစုံသော အကြောင်းအရာများကို အမှတ်တယရေးသားမှတ်တမ်း တင်ထားတတ်ပါတယ်.. အမှန်အတိုင်း.. စိတ်ရင်းအတိုင်း..အညွန့် အကွန့်တွေမပါဝင်ပဲ.. ရိုးရိုးစင်းစင်းလေး... ကိုယ်နားလည်ခံစားရသလိုလေးရေးကြတာပါ.. အရင်းခံလေးအတိုင်း စကားလုံးတွေကမလှပပါဘူး..
တင်ပြတာကျတော့ (ကိုယ်သိသလောက်ပေါ့လေ...) လူတွေကိုသိစေချင်တယ်.. မျှဝေချင်တယ်.. အသိလေးတွေပေးချင်တယ်.. ရှောင်စေချင်တယ်.. လိုက်နာစေချင်တယ်.. ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ပါ.. ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကို လှပအောင် ကွန့်ညွန့်ပြီး စကားလုံးကြွယ်ကြွယ်နဲ့ လူတွေကိုဆွဲဆောင်. အောင်မြင်အောင် ကြိုးပမ်းမှုတမျိုးပါ..စည်းတွေ ..ဘောင်တွေ.. ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်.. မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်..စာဖတ်သူရဲ့ တုံ့ပြန်မှု.. အားပေးမှု.ဝေဖန်မှု.. ချီးကျူးမှု..မှု ...မှု... အများကြီးနဲ့ပေါ့..
စာရေးခြင်းအတတ်ပညာမှာ ပါရမီမပါခဲ့လေတော့..စာဖတ်ပြီး..မှတ်သားတွေးတောနေရတာကိုပဲ (စာရေးတတ်သူများကို အထင်ကြီးအားကျနေရုံမှအပ) ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေတဲ့ စာပေအားပေးသူပါ..
DIARY: Dear! I always remember you. ဆိုသလို..ကျမတို့ ချရေးကြတဲ့ ကဗျာလေးတွေ.. စာတိုပတ်စလေးတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးက ဒါပါပဲ.. ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိပါဘူး.. ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ.. ခံစားချက်လေးတွေကို အမှတ်ရစေချင်တာပါပဲ....
ကိုယ့်အတွက်တော့..Internet ဆိုတာ..စိတ်ရဲ့အပန်းဖြေရာ.. နှလုံးသားရဲ့ အလွမ်းခြေရာလေး တခုပါပဲ.. ခောတ်သစ်ဒိုင်ယာရီလေးတအုပ်ပေါ့ရှင်..
စာရေးသူ - မမလွင် (ခ) မမိုး
Posted by Ree Noe Mann at 6:50:00 AM5comments:
Posted by Ree Noe Mann at 6:36:00 PM2comments:
မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ မစားရတာကြာပြီဖြစ်လို့ မုန်းဟင်းခါးနဲ့ လက်သုပ်စုံ လုပ်စားဖြစ်ကြတယ်. "ကြတယ်" ဆိုပေမယ့် ချက်တာ ပြင်တာ ဆင်တာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပါ.. ရုံးကသူငယ်ချင်း တရုတ်မတယောက်ရယ်. အိမ်နားက ညီမလေး ၂ယောက်ရယ် မောင်လေး ၂ ယောက်နဲ့ (တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ပလန်းနက်အလှူ ဗီစီဒီ လာယူမယ်ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ ရောက်ရောက်မလာတဲ့) ကိုလင်းမောင်မောင် (ခ) လန်လန်ရယ်..ဖိတ်ကြားထားသူများပေါ့)
ချက်ရင်း ပြုတ်ရင်း..ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ အတွေးတိုင်းမှာပါနေကျ ကျမချစ်သူလေးကို သတိတယရှိသွားတယ် ..သူရော...( ရန်ကုန်မှာတုံးက ရုံးဆင်းပြီဆို ဘုရားမသွားခင် တရုတ်တန်းက အစုံသုပ်စားရင်းစား, မစားရင် သူ့ရုံးနားက မုန်းဟင်းခါးကောင်းတယ်ဆိုပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း သွားစားကြတာကို သတိရမိတယ်။ ချစ်သူ..ပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်..)
သူလဲနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကိုယ်ဘာပဲစားစား သူ့ကို အမြဲသတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ်ကမိန်းခလေးမို့ ဘာမဆိုစားချင်တာကို ကိုယ်တိုင်အချိန်ယူပြီး သက်သက်သာသာနဲ့ လုပ်စားလို့ရပေမယ့် သူက၀ယ်စားဖို့တောင် အလွယ်တကူရပါ့မလား..ဆိုင်တွေနဲ့ ဝေးများနေမလား..နီးစေဦးတော့ အဆမတန်ဈေးကြီးလို့ ချွေတာပြီးပဲ မစားပဲနေနေမလား..ဖြစ်သလိုပဲစားပြီး အစားအသောက် ဆင်းရဲနေမလား..ထမင်းဟင်းတွေရော ဘယ်လိုများစီစဉ်ပြီး စားနေရပါလိမ့်နော် ..ခုလောက်ဆို အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းတွေကို လွမ်းနေရောပေါ့.. (အမေက ဟင်းချက်အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်လေ..) ချစ်သူ..အစစအရာရာ စိတ်တိုင်းကျ အဆင်ပြေပါစေကွယ်..)
ဒါမှမဟုတ် (တအိမ်တည်းမဟုတ်တောင်) ဟိုရောက်နေကြတဲ့ မိန်းခလေးအဖော် သူငယ်ချင်းများနဲ့တပျော်တပါး ပွဲတော်တည်နေမလား (ကျမကိုမေ့နေမှာတော့ အသေအချာပါပဲ) ...ချစ်သူက ပျော်ပျော်နေတတ်တော့ စလိုက် နောက်လိုက်..ကောင်မလေးတွေနဲ့ ပြုံးရွှင်ရယ်မောနေမလား... ဘုရားရေ... ဦးနှောက်ထဲကို..ကျမရင်ထဲကို တိုးဝင်လာတဲ့ အတွေးတခု... အသက်ရှုမရလောက်အောင်မွန်းကျပ်သွားပါလား..အဲဒီအတွေးက ဘာကိုမှ ဆက်လုပ်ချင်စိတ်မရှိအောင် ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားပါလား.."အနီးဆုံးလူက အချစ်ဆုံး "လို့ စကားရှိတယ်လေ။ အဲဒီမိန်းခလေးအဖော်တွေနဲ့ ကျမချစ်သူ ရင်းနှီးသွားလေမလား... ဟင့်အင်းနော်.. ခွင့်မလွှတ်ဘူးကွယ်...
ကျမကိုထားခဲ့ပြီး ကျမအရင် သူ့ကောင်မလေးဆီကို ပြန်သွားတယ်ဆိုတာ ကြည်ဖြူနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးကွယ်... ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် သူ့ကောင်မလေးနဲ့ ခွဲခွာခဲ့တယ် ဆိုတာ မသိချင်ခဲ့ပေမယ့် အချစ်ဦးဆိုတာ မေ့နိုင်ကောင်းတဲ့ အရာ မဟုတ်တာကိုတော့ လက်ခံထားတယ်လေ..ကျမသိပ်ချစ်သလို သူ့ကောင်မလေးကို ကျမအချစ်တွေထက် မလျော့တဲ့ အချစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတချို့တွေရဲ့ ပွင့်လင်းရဲတင်းမှု၊ ဖော်ရွေလိုက်လျောမှုတွေက ကျမချစ်သူရဲ့ တယောက်တည်း အထီးကျန်မှုတွေ၊ အလုပ်ရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ အစားအသောက် ခက်ခဲမှုတွေ.. နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ခံစားမှုတွေကို သိမ်းပိုက်သွားမှာ စိုးတယ်..
ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုစွန့်ပစ်၊ ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်တဲ့ နှောင်ကြိုးတွေကို ဖျက်ပြီး အိပ်မက်အဟောင်းကို အသက်သွင်းဖို့ သူ့အချစ်ဦး ကောင်မလေးဆီပြန်သွားခဲ့တဲ့ ချစ်သူ.. သူ့ကောင်မလေးအပေါ် ထပ်ပြီး သစ္စာပျက်မှာ စိုးတယ်..
ဘယ်လိုကံအကြောင်းတရားတွေကမှ ကျမချစ်သူကို သစ္စာမဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင် မလုပ်ပစ်ပါစေနဲ့ကွယ်..............။
ဟယ်တော့ မုန်းဟင်းခါးအိုးကြီး ပွက်ပွက်ဆူနေပြီ......း)
စာရေးသူ - မမလွင်(ခ) မမိုး
Posted by Ree Noe Mann at 10:17:00 PM 10 comments:
ကျွန်တော်အသက် အခုဆိုရင် ၂၉ထဲကိုရောက်ချင်းမလှရောက်နေပါပြီ။ ဒီ ၂၉နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ကျွန်တော် ဘာများပြောင်းလဲသွားလဲ၊ ဘာများတိုးတက်မှုရှိလားလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ဆင်ခြင်မိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိထားပြီး ကြည့်မိတယ်။ အသက်သာ လူ့သက်တမ်းရဲ့ တဝက်ကို ရောက်ချင်းမလှ ရောက်နေပြီ။ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတဲ့ လက်စုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်တာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိသေးဘူး။
တခါတခါလည်း ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြန်မေးနေမိတယ်။ စိတ်ပျက်မိလားလို့ပေါ့။ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုပြန်ဖြေမိတယ်။ စိတ်ပျက်တယ်တဲ့( စိတ်ပဲ ပျက်တာနော်၊ စိတ်ဓာတ်မကျဘူး) ။ ဟုတ်တယ် ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး။ ဘာကိုစိတ်ပျက်မိလဲလို့ မေးပြန်တော့ စီးပွားရေး အခြေအနေပေါ့။ ကိုယ် သိတက်နားလည်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကကျနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပြီ။
စီးပွားရေးကျလို့ စိတ်က မပျက်သေးဘူး။ မမျှော်လင့်ပဲ အဖေဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော်မှာ အားကိုးပြီနေနေရတဲ့ တောင်ကြီးတစ်လုံး ပြိုကျသွားသလိုပဲ ကျနော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကျနော်တွေးပူနေဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျန်နေသေးတဲ့ အမေဆိုတဲ့ အားတွေနဲ့ ကျနော့် အဖေရဲ့ တာဝန်တွေကို ကျနော် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကျနော် ထမ်းဆောင်နေခဲ့တယ်။
ပညာရေး ကြပြန်တော့လည်း ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ထားတာမဟုတ်တော့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လည်း မပြုနိုင်ဘူးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့နေတော့ လိုအပ်လာမှာပါလေး ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ မဖြစ်မနေ ယူလိုက်မိတဲ့ ဘွဲ့က B.A (History)။
ကဲ..ထားပါ။ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျနော် မကျေနပ်တာက မကျေနပ်တာပေါ့။ အရှုံးပေးလားဆိုတော့ အရှုးံမပေးဘူး။ မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကျနော်လှုပ်ရှားတယ်။ ကျွန်တော် ၁၈နှစ်မှာ ၁၀တန်းအောင်တယ်။ ၁၉နှစ်မှာ မိဘတွေနဲ့ ခွဲပြီး အလုပ်စလုပ်နေပြီ။ ၂၀၀၀ ဇန်နဝါရီလမှာ ကျနော်ရဲ့လစာ (၅၀၀၀)နဲ့ ရန်ကုန်မှာ အဆောင်နေ အသိအိမ်မှာ ခဏတည်၊ မိဘနဲ့ အဝေမှာနေပြီး ကျနော့်ရဲ့ ဘဝကို တစ်ယောက်ထဲ စခဲ့တာပေါ့။
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် မိဘနဲ့ ဝေးရာကိုထွက်လာခဲ့ပေမယ့် အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့ ကျနော်ရဲ့စိတ်ကြောင့် ကျနော်ကျေနပ်နေခဲ့မိတာအမှန်ပါ။ အမေ့အိမ်ကို မတမ်းတမိခဲ့ဘူး။ မလွမ်းဆွတ်မိခဲ့ဘူး။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်တော့ အဖေကဆေးရုံးမှာ။ အဖေ အိမ်မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော် ရန်ကုန်သွားပြီ အလုပ်လုပ်မဲ့ အစီအစဉ်ကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဖေက ကျနော်ကိုသိပ်ချစ်တာဗျ။ အဖေဆေးရုံးရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမေကို ပူဆာပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တာ။
အိမ်က မထွက်ခင်မှာ အမေကို ကျနော်စကားတစ်ခွန်းတော့ ပြောခဲ့မိတယ်။ အမေ … အမေ့သား အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အမေတို့နဲ့ သားလုံးဝ အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူး။ တကယ်လို့ သားဆက်သွယ်လာခဲ့ရင်တော့ အမေ သားကို အဆင်ပြေလားလို့ မေးဖို့ မလိုတော့ဘူး .. လို့ ကျနော် အမေကိုပြောခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်မှ မပြောင်းမရွှေ့ပဲ အဲကုမ္ပဏီမှာပဲ ကျနော် ၅နှစ်လောက် ကျနော် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်သက်ကလေး ရလာတော့လည်း Rank အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျနော် လုပ်ဖူးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှတဆင့် ၂၀၀၄လောက်မှာ စင်ကာပူအလုပ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ရတာနဲ့ ဝင်ပြီး အင်းတာဗျူးဖြေလိုက်တယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ လေးယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြေရတဲ့ အထဲမှာ သုံးယောက်အောင်ပြီး ကျနော်က ကျကျန်နေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ် ၂၀၀၄ ဇူလိုင်လောက်မှာ ကျနော်မလေးရှားကိုရောက်ခဲ့တယ်။ မလေးရှားမလာခင် မြန်မာပြည်က သဌေးက ကျနော်ကို ဘာပြောလဲဆိုတော့… ၁၅ရက်တောင်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ပြန်ရောက်လာမှာတဲ့..လေ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျနော်လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းက လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုတော့ ကျနော် သက်သက်သာသာ နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၇ မေလ လောက်မှာ မြန်မာပြည်ပြန်ခဲ့ပြန်တယ်။ မလေးရှားကိုသွားဖူးတဲ့ ကျနော်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေကပြောကြတယ်။ မလေးရှားက မကောင်းဘူးတဲ့..လေ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မလေးရှားကို မရောက်ခင်အချိန်ထိကတော့ ဒီစကားကို သိပ်လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တိုင် နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ခံစားလိုက်ရမှပဲ လက်ခံမိတော့တယ်။ သုံးနှစ်ဆိုတဲံ အချိန်သာကုန်သွားတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုကလွဲပြီး မယ်မယ်ရရ ပြစရာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။
စိတ်ဓာတ်ကျလားလို့ မေးအုံး။ လုံးဝပဲ။ ကျွန်တော် စင်ကာပူသွားဖို့ ထပ်ကြိုးစားတယ်။ သင်တန်းတွေတက်တယ်။ Agent အမျိုးမျိုးနဲ့အပ်ပြီး အလုပ်ရှားတယ်။ အင်းတာဗျူးတွေ ဝင်တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ ကျနော်ကပဲ ကံကောင်းတာလား၊ အကြောင်းကပဲတိုက်ဆိုင်သွားလို့ပဲလာတော့ မသိဘူး မလေးရှားမှာ တူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျနော်စူပါဗိုက်ဆာ မလေးတရုတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရပြီ စင်ကာပူ ဆိုတဲ့ ကျွန်းလေးသေးသေးလေးပေါ်ကို ၂၀၀၈ မေလမှာ ရောက်လာခဲ့ပြန်တာပေါ့။ ခုဆိုရင် ၁နှစ်နဲ့ ၇ လလောက်ရှိပြီ။
၂၀၁၀ ဧပြီ ဆိုရင် ကျနော်ရဲ့ ပါမစ်သက်တမ်းကကုန်တော့မှာ။ ကျနော် မြန်မာပြည် ပြန်နိုင်လားလို့ ကျနော်ကိုယ် ကျနော် ပြန်မေးကြည့်တယ်။ အဖြေက … ဟင်းအင်း.. တဲ့။
၁၉နှစ်သားထဲက မိဘနဲ့ခွဲပြီး အဝေးမှာနေလာခဲ့တာ ခုဆိုရင် ၁၀နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလကြီးကိုတောင်ရောက်နေပြီ။ ဘယ်ဘဝက ဝဋ်ကျွေးများလဲလို့ တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိတယ်။ မိဘနဲ့ ခွဲနေရပြီး မိဘကို လုပ်ကျွေးခွင့်ပဲရပြီ ပြုစုခွင့်မရတော့လည်း အခုချိန်မှာပေါ့လေ ကျနော်ကို အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒကိုပြောပါဆိုလျှင်……
… အမေ့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုမျိုးနေချင် နေမိပါတော့တယ်…..
Posted by Ree Noe Mann at 7:07:00 PM 19 comments:
ငါ့ရင်ခွင် တစ်စုံကို ရင်ခုန်သံလားလို့
" ဒုံး " ဆိုတဲ့ တုံးထုသံတွေ မမြည်းပဲ
ငါ့ရင်ထဲမှာ တံဆိပ်တွေ အပြည့်နဲ့
Posted by Ree Noe Mann at 12:16:00 AM 18 comments:
အမေပန်းရုံက ဖျောင်းဖျပါ၏။ ကိုပြေသိမ်းက မအိမ်ကံ ၀င်ပြောလိုက်တာကို ကြားရတော့ အံ့သြသွားခဲ့သည်။ သူ ကိုယ်တိုင်ပင် မီးလောင်သည့်နေ့က တစ်ကျောင်းပြိုတော့ နှစ် ကျောင်းဆောက်ကြတာပေါ့လို့ ပြောခဲ့သည်။ တကယ်တမ်း ရပ်ရွာက၊ အလှူရှင်က၊ စေတနာရှင်က ကုသိုလ်ပါပါရစေ ဆိုတော့ တစ်ဦးကောင်းမဆန်သာပါ။ သစ်အဖျားဝါးအရင်း လူတိုင်းပါနိုင်လေ ကောင်းလေ။
“ဟုတ်သားပဲ အိမ်ကလေးရယ်။ မောင်သာအောင်တို့က တစ်ကျောင်းလုံး ဆောက်ပါရစေ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုဟာက အများထဲ ပါချင်ကြတာပါ။ အိမ်ကလေးက စေတနာ ရှိသလောက် မတည် လိုက်ပေါ့။ လိုတာအများက ဖြည့်တော့လည်း အများ ကောင်းမှုဖြစ်ရတာပေါ့”
မအိမ်ကံက အမေနှင့် လင်သားတို့၏ ဆန္ဒကို ဘဲ့မတိုက် ချင်သော်လည်း ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ ဆိုသလို ရွှေကျောင်းကြီး ဆောက်ဦးတော့ တစ်ဦးတည်းပဲ ဆောက်မည်ဟု ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှိသမျှ စည်းစိမ်တွေ ကုန်ချင်ကုန်စေတော့ အရှင်ထွက် ထွက်ရ ထွက်ရ၊ အသေထွက် ထွက်ရ ထွက်ရ အောလိုက်ဖို့လည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပင်။ သည်အချိန်မှာ အကွက်ကောင်း ၀င်နင်း လိုက်သူမှာ သာအောင်ဖြစ်သည်။
“ဟုတ်ပါသယ် မအိမ်ကံ။ တို့တစ်တွေလည်း အသက်တွေ မငယ်တော့ပါဘူး ငါ့နှမရာ။ လူ့မနော အချောချည်း မဟုတ်လေတော့ အရင်က ရှိခဲ့တဲ့ ပြောမှား ဆိုမှားရှိခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ကျောင်းအလှူနဲ့ ချေချင်သာလည်း ပါပါသယ်။ မအိမ်ကံက အမေ ခေါ်စရာ ရှိပါသေးသယ်။ ငါ့မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ တို့မိဘများရောတို့ပါ စာမတတ်ကြလေတော့ ပညာ ပါရမီ သံသရာ ပါအောင် လှူချင်ကြသာပါ”
“ဟုတ်ပါသယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ တို့ကနောင်မှ ခါးချိုး ရှာရရှာရ။ ရွာကျောင်း မီးလောင်သာကို ကျောင်းကြီး ငုတ်တုတ်ပြန်ပေါ်သဟဲ့ဆိုသာ တခြားရွာတွေကို ပြချင်သာလည်း ပါပါတယ်။ ကြွားဝါချင်သာ မဟုတ်ရပါဘူးအေ။ ဇောင်ချမ်းကုန်းက ညီသဟဲ့ ဖြစ်ချင်သာပါ။ ညည်းခွင့်ပြုရင် တစ်ကျောင်းလုံးတောင် တာဝန်ယူ လိုက်ချင်ပါရဲ့”
ရွှေမှုံစကားကို မအိမ်ကံ နားမ၀င်ပြီ။ ခွင့်ပြုရင် တစ်ကျောင်းလုံးတောင် လှူလိုက်ချင်သတဲ့လား။ ဇောင်ချမ်းကုန်းက ညီသဟဲ့လို့ ပြချင်ကြရော့လား။ ညည်းက ညှိချင်ဦးတော့ မညီနိုင်တော့ပေါင်အေ။ ပြဒါးရှင်လုံး ထန်းလျက်နဲ့ လဲရမယ်လို့။ မဟုတ်သဲ့ စကား မပြောစမ်းပါနဲ့။
“မဟုတ်ဘူး။ ညည်းတို့ ပြောနေသာတွေ မဟုတ်ဘူး။ သည်ကျောင်းကြီးက သူ့ဟာသူ လောင်သဲ့မီး မဟုတ်ဘူး။ လူရှို့သဲ့မီး။ မသမာသူက ရှို့ခိုင်းသဲ့မီး တခြားရွာက လူခေါ်ပြီး ရှို့ခဲ့သဲ့မီး။ ငါတို့မှာ တောစပါး လိုချင်လွန်းလို့ အိမ်စပါးနဲ့ ရင်းရသာအေ့။ တစ်ကျောင်းလုံးလည်း မရဘူး။ တစ်ချိုးတစ်ဖဲ့ လည်း မရဘူး။ စကားကုန်ပြီ”
မအိမ်ကံသည်လောက် ရက်ရက်စက်စက် ပြောနေတာမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးကြတော့ အားလုံးက အံ့သြနေခဲ့ကြသည်။ မအိမ်ကံ ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်း မသိကြသော်လည်း တစ်စုံ တစ်ရာ မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတာတော့ ရိပ်မိကြပုံပေါ်ပါ၏။ စကားကုန်ပြီဆိုသည့် စကားကြောင့် ကိုပြေသိမ်းက ဟန့်တားသည်။ အမေ ပန်းရုံက ၀င်ဖျောင်းဖျသည်။ မလှအုံက ၀င်ချော့သည်။ ကျေးဥကတော့ မအိမ်ကံ၏ ခံစားချက်ကို အူမချေး ခါးသိထားသူ ဆိုတော့ ဘာမှ ၀င်မပြောဘဲ နားထောင် နေခဲ့ပါ၏။ သာအောင်က မအိမ်ကံ အကြောင်း သိထားသူ ဆိုတော့ စိတ်ဆိုးပုံတော့ မရ။ သို့သော် သည်လောက်ခဲယဉ်းလိမ့်မည် မထင်တော့ ဘယ်စကား ပြောရမှန်း မသိဘဲ ရွှေမှုံ့မျက်နှာကို သာ ကြည့်နေခဲ့သည်။ ရွှေမှုံက အမေ ပန်းရုံဘက်ကို လှည့်ကာ တောင်းပန်သည်။
“အရီးရယ်။ ကျူပ်တို့ကို မအိမ်ကံ ဘယ့်နှယ် ဖြစ်နေသလဲ မပြောတတ်ပါဘူး။ မတွက်ကပ် သင့်သာ တွက်ကပ် နေသလိုပဲ။ ကျုပ်တို့က ရွာစိတ်ရပ်စိတ်နဲ့ လာတောင်းပန်သာပါ။ ကျုပ်တို့ သမီးလေးကလည်း ဆရာလေး ကျောင်းမှာပဲ ခရီး ဆုံးရမှာပါ။ မြို့ကျောင်းလည်း တက်မထားနိုင်ပါဘူး အရီးရယ်။ ကိုယ့်နယ် ကိုယ့်ရွာက ကလေးတွေ အားလုံးအတွက် စဉ်းစားသာပါ။ အခုတော့ ကျုပ်တို့ကို ထဆစ်(ထန်းဆစ်)လည်ကျိုး လှေပိုး ထိုးတွေကျလို့”
အမေပန်းရုံက သူ့ကို တိုင်တည်နေသော ရွှေမှုံကို ကြည့် ပီး သနားနေပုံ ပေါ်သည်။ ရွှေမှုံ ပြောတာလည်း မှန်သားပဲ။ သူတို့ ကိုယ်ကျိုး မပါပါ။ အများဆိုင် ကျောင်းမှာ တစ်ဖဲ့တစ် မလှူပါရစေဆိုတာ လက်ခံကောင်းသားပဲ။ သမီးက ဘာဖြစ် လို့ပါလိမ့်။ ခက်တာက တစ်ဖက်ကလည်း မငြင်းသာ။ တစ်ဖက်ကလည်း သမီး။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အမေပန်းရုံ သည်ကိစ္စ သည်မှာတင် ပြီးချင်ပါ၏။ ကိုပြေသိမ်းကတော့ မအိမ်ကံ တစ်စခန်း ထလာတာကို ဇွတ်မငြင်းချင် သေးသလို အသာငြိမ် နေသည်။ မအိမ်ကံက ရွှေမှုံသမီး မှုံနံ့သာကို မြို့ကျောင်းလည်း တက်မထားနိုင်ပါဘူး ဆိုတာကြားတော့ မျက်နှာကို မော်ထား လိုက်ပါ၏။ လေတော့ လျှော့ချလိုက်သည်။
“ထဆစ်လည်ကျိုး လှေပိုးထိုးတွေ မဟုတ်မှန်းသိပါ သယ်အေ။ ညည်းတို့ကို ငါသည်လောက်ပဲ ပြောပါရစေတော့။ ညောင်မြစ်တူးရင်း ပုတ်သင်ဥတွေပါ ပေါ်ရော့မယ် ငါ”
ရွှေမှုံက မအိမ်ကံ စကားမပြီးခင်မှာပင် စကားဝင်ဖြတ်သည်။ ရွှေမှုံက လေသံ မာလာခဲ့ပြီ။
“နေပါဦး မအိမ်ကံ။ ညောင်မြစ် မကလို့ ပိန္နဲမြစ် တူးတူး ရွှေမှုံတို့မှာ ပုတ်သင်ဥ ပေါ်စရာ မရှိပါဘူးအေ့။ ရွှေမှုံဆိုသာ တစ်ချိန်က ရွာ့ကွမ်းတောင်ကိုင်ပါဟဲ့။ ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ ဂုဏ်နဲ့ဒြပ် နဲ့ပါ။ ညည်းက ရှဥ့်တစ်ကောင် မြားတစ်စင်း ပစ်နေလို့ ပြောရ တာပါ။ ညည်းသဘောပါအေ။ ကိုင်း ကိုသာအောင် သွားကြစို့”
ရွှေမှုံဆိုသာ ရွာ့ကွမ်းတောင်ကိုင်ပါတဲ့လား။ ဒါ ညည်း နိုင်လောက်တဲ့ စကားပေါ့။ ငါက ရှုံးခဲ့သာကိုးအေရဲ့။ မအိမ်ကံက ထိုင်နေရာက ၀ုန်းခနဲ မတ်တတ် ထရပ်လိုက်သည်။ ခါးကို တင်းတင်း ထောက်ထား လိုက်ရင်းက မဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်သည်။ သမုန်းကိုင်းက ကြီးတော် စံရွှေတူဆိုသူ လူပုပု တစ်ယောက် ရွာကျောင်း မီးရှို့ခဲ့တာကို ထုတ်ပြောဖို့ အချိန်ကျပြီလို့လည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စကားက တော်တော်နှင့် ထွက်မလာ။ လည်ချောင်းမှာ နာကြည်းမှုတွေ ဆို့ပြီး နင်နေသည်။ သည် အချိန်ကလေးမှာ ကိုပြေသိမ်းက အားလုံးကို ၀င်တားသည်။ စကားတွေ ရုန်းရုန်းရင်းရင်း ရှိကြတော့မှာကို မြင်လိုက်ပုံလည်း ရပါ၏။
“ကိုင်းပါလေ။ ဖြတ်ကြရအောင်။ အိမ်ကလေးကလည်း တော်ပါတော့။ မောင်သာအောင်တို့ကလည်း စိတ်မရှိကြပါနဲ့တော့။ ပြဿနာက ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ကလေးကလည်း သူလှူတဲ့ ကျောင်း မီးလောင်ကတည်းက ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေရှာသယ်။ လက်သည်ကို မသိပေမယ့်”
“မအိမ်ကံ လက်သည်ကို သိသယ် အစ်ကို”
ကိုပြေသိမ်းက မအိမ်ကံကို တအံ့တသြ ကြည့်လိုက်သည်။ သို့သော် အရာရာကို ကိုပြေသိမ်း ရိပ်စားမိလိုက်ပြီ။ ဘယ်သူမှားသည်၊ ဘယ်သူမှန်သည် မပြောနိုင်သော်လည်း မအိမ်ကံ သိထားသည် ဆိုသူက သာအောင်တို့နှင့် ပတ်သက်နေသူ ဖြစ်ရမည်လို့ တွေးမိလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Ree Noe Mann at 7:41:00 PM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:40:00 PM 10 comments:
ဒါကတော့ သစ်ပင်မှာ မီးလုံးတွေကို အလှဆင်ထားတာပါ။ ဒီတစ်ပင်ထဲ အဟုတ်ရပါဘူး။ လမ်းဘေးအပင်တိုင်းကိုလုပ်ထားတာပါ။
မနေ့က အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ တစ်နေ့လုံး ဘယ်မှမသွားပဲ ဗီဒီယိုကို တနေ့ကုန်ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တာ ညနေလောက်မှ မျက်စိကညောင်းလာလို့ ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ION ဘက်ကို သွားပြီး ဓာတ်ပုံသွားမယ်ဆိုပြီး ရ နာရီခွဲလောက်မှ အပြင်ကို ထွက်သွားလိုက်တယ်။ ခရစ္စမတ် အတွက် အကြိုပြင်ထားကြတာ လှမှလှပဲ။ လှမယ်ထင်တဲ့ နေရာတွေ ကိုလိုက်ရိုက်မိတာ တော်တော်များသွားတယ်။ အိမ်ကို ည ၁၁ လောက်မှ ပြန်ရောက်တော့တယ်။ အဲလို...အဲလို...
အောက်က ကလစ်လေးကို နိုပ်ပြီး ပုံတွေကို အားပေးသွားပါအုံးဗျာ။ မောင်နှမတွေကို ကြည့်စေချင်လို့ သွားရိုက်ထားတာပါ။ စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ မောင်နှမတွေကတော့ ရောက်ဖူးလောက်ပြီး ထင်ပါတယ်။
TANGS Shopping Mall ကို အလှ ဆင်ထားတာပါ။
ဒါလည်းလှလို့ ရိုက်လိုက်တာ ဘယ်နားကမှန်း မသိလိုက်ဘူး
ဒါကတော့ လမ်းဘေး သစ်ပင်ငယ်လေးကို မီးလုံးလေးတွေတင်ပြီ အလှဆင်ထားတာ။
လမ်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ အရုပ်လေးတွေပါ။ လူရှင်းတုန်း ပြေးပြီရိုက်ထားရတာ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ စောင့်နေကျတာ လူတွေအများကြီးပဲ။
ဒါက ION အရှေ့က ခရစ္စမတ် သစ်ပင်ကြီးပါ။
ခရစ္စမတ် သစ်ပင်ကြီးအထဲမှာ မီးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာပါ။
သူများတွေ ရိုက်တဲ့ အတိုင်းလိုက်ရိုက်ထားတာပါ။ အောက်ကပုံက။
ပုံတွေက တော်တော်လေးကိုများလို့ တစ်ခုချင်းစီ မရှင်းပြနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။ လှလို့လည်း မော့ချက် ဆိုတာ နာမည်ကြီးတာထင်ပါ့ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 10:40:00 PM 12 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 4:00:00 PM 23 comments:
ဒါက ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ION Shopping Centre ရဲ့ အပေါ်က လူနေ အဆောက်အဦးပါ။ ဈေးကတော့ ကြီးသလာတော့မမေးပါနဲ့။ ဈေးအနည်းဆုံးကတော့ စင်ကာပူဒေါ်လာ 5.5 Millions ကစပါတယ်။ စဉ်းစားနေတာ တစ်ခန်းလောက်ဝယ်လိုက်ရမလားလို့...
ကျနော်တို့ ဆောက်နေတဲ့ အထပ်က အားလုံးပေါင်း ၅၆ထပ်ပါ။ ခုကျနော် အလုပ်လုပ်နေတာအထပ်၄၄မှာပါ။
ဒီ ၄၄ထပ်ကနေ လက်အား အလုပ်အားနေတာနဲ့ လက်တည့်စမ်းထားတာပါ။
ဒီပုံတွေက စင်ကာပူ တစ်မြို့လုံးကို အကုန်မြင်နေရတဲ့ လေးဖက်လေးထောင့်ကနေ လိုက်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။ ဘာမှမဟုတ် ဆားချက်သည်ပေါ့။ ဟဲဟဲ.......
Posted by Ree Noe Mann at 12:50:00 AM7comments: